Jabhada Al Nusra ee Suuriya ka dagaalanta oo iclaamisay in ay ka go’een urur weynaha al-Qaacida - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldJabhada Al Nusra ee Suuriya ka dagaalanta oo iclaamisay in ay ka go’een urur weynaha al-Qaacida
July 28, 2016 Puntland Mirror World 0
Hoggaamiyaha kooxda Al Nusra Abu Maxamed al-Julani . Sawirka: AFP.
Qahira-(Puntland Mirror) Kooxda ka dagaalanta dalka Suuriya ee al-Nusra, sidoo kale loo yaqaan jabhada al-Nusra ayaa iclaamisay in ay ka go’aday urur weynaha al-Qaacida.
Hoggaamiyaha kooxda Abu Maxamed al-Julani ayaa fariintiisii kowaad oo muuqaal ah ku sheegay in magacooda uu noqon doono Jabhat Faatix al-Shaam [jabhada furashada Suuriya].
Waxaa loo malaynayaa in kooxda ay rajayn doonto in ay xiriir la samaysato kooxaha kale ee hubaysan ee ka dagaalama dalka Suuriya.
Jabhada ayaa saddexdii sanno ee u dambaysay ka dagaalamysay dalka Suuriya, iyadooda u jeedadoodu tahay in ay dowlada Islaami ah ka dhisaan halkaas.
Al Nusra oo ahayd kooxda ugu ciidamada badan kooxaha kasoo horjeeda xukuumada Madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa lagu magacaabi jiray garabka al-Qaacida ee gudaha Suuriya.
July 5, 2016 Boqorka Sucuudiga oo wacad ku maray inuu la dagaalami doono kooxaha xaqjiriinta ah
October 6, 2016 Al-Shabaab oo ugu yaraan lix qof ku dishay weerar ka dhacay Kenya
Al-Shabab attack in Kenya kills at least 6
Islamist militants from the Somali group al Shabaab killed six people in an attack in northeast Kenya on Thursday, the latest in a series of raids by the group in the region. Mandera on the [...]
Police officers have urged Mombasa, Malindi and Nairobi residents to be vigilant after intelligence reports showed that the al Shabaab terror group are planning to carry out attacks during Ramadan. In a statement, Inspector General [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxo hubaysan oo aan la aqoon cida ay yihiin ayaa xalay oo Axad ahayd nabadoon ku dilay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho. Nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Faarax ayaa [...]